Eyona Washerum Flat Washer, iAluminiyam yeflethi yeAluminiyam yeFleit, iNkunkuma engasasebenziyo yeAluminiyam yeFlat.
Inkcazo:IAluminiyam Flat Washer,IAluminiyam Hard Flat Washer,IAluminiyam yeflethi yeAluminiyam,I-Washer engasasebenziyo yeAluminium Flat,,
Home > Imveliso > Izinto zokuhlamba ezihlaziyiweyo > IAluminiyam Flat Washer
Iintlobo zeMveliso ze- IAluminiyam Flat Washer , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, IAluminiyam Flat Washer , IAluminiyam Hard Flat Washer ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umgangatho wokukhanya wombala we-Muti-colour Flat Head Aluminium Washers
I-M3 ye-Aluminium enemibala ye-Anodised Flat Washer
Yenza ngokwezifiso ii-washers ze-m18 ze-aluminium
I-aluminium weld washer yeasher yodidi
Ingcaciso yeMveliso Umgangatho wokukhanya wombala we-Muti-colour Flat Head Aluminium Washers Kwinto yokuhlanjwa kwealuminiyam, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu
Umbala wesiqhelo weAnodum Aluminium Countersunk ngeXabiso eliPhantsi Izinto ezingafunekiyo ezenziwe nge-aluminium okanye i-aluminium alloy zibonelela ngezinto ezilula kwaye zinokunganyangeki ngakumbi kune-washer ekhanyayo yensimbi. Zikwamelana...
Iindidi ngeendidi zeAluminiyam ezinemibala engasasebenziyo yentsimbi Izinto ezingafunekiyo ezenziwe nge-aluminium okanye i-aluminium alloy zibonelela ngezinto ezikhaphukhaphu kwaye zihambelana ngakumbi ne-corrosion kune-washers yecarbon yentsimbi....
I-M3 Imibala yeAluminiyam yeAluminiyam enemibala Isitokhwe sethu esiqhelekileyo se Washer kubandakanya iAluminiyam Ibala leNkunkuma iNew Washer, iAluminiyam yeFleather Washer, Inkunkuma yensimbi engenasici, iNaylon Washer. Izinto zethu zokucoca...
Imibala ye-anodize yealuminium fender washers Kwimisebenzi yokuhlamba i-aluminium, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu emarikeni. Sineesayizi ezimbini kwisitokhwe sethu.M3x7x2.5mm washer ziyafana...
IAluminiyam yoXinzelelo oluPhezulu lweNinzi yeFlat Washer Izinto ezingafunekiyo ezenziwe nge-aluminium okanye i-aluminium alloy zibonelela ngezinto ezikhaphukhaphu kwaye zihambelana ngakumbi ne-corrosion kune-washers yecarbon yentsimbi. Zikwamelana...
Yenza ngokwezifiso ii-washers ze-m18 ze-aluminium Iimbonakalo: 1. Yenziwe nge-6061 Aluminium Alloy, ukukhanya, ubunzima obuqinileyo, bukhuselekile. 2. Yongeza indawo yeendawo ekunxibelelana kuyo ngebhelt okanye i-nati, thintela umhlaba ukuba...
aluminium isitshixo ikomityi ishers I-aluminium washers luhlobo lohlobo lwealuminiyam olugqibeleleyo, lwenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye lunika amandla okuqinisa ngokukhawuleza ngelixa lisasaza umthwalo wesikrufu. Ngenxa yezinto...
Amazantsi e-aluminium endulini ye-washer I-aluminium washers iluhlobo lweenqanawa ezenziwa ngokukhawuleza, Yenziwe nge aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba kube lula ukubethelela ngelixa usasaza umthwalo wesikwere. Ngenxa yezinto...
Umbala oMhle weAluminiyam yokuBala yeFash washer emnyama I-aluminium washers iluhlobo lweenqanawa ezenziwa ngokukhawuleza, Yenziwe nge aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba kube lula ukubethelela ngelixa usasaza umthwalo wesikwere....
Itywina elineflethi yedrone yemoto Kwimisebenzi yokuhlamba i-aluminium, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu emarikeni. Sineesayizi ezimbini kwisitokhwe sethu.M3x7x2.5mm washer zingumdlalo kunye...
Imibala emininzi ye-CNC enemibala ye-aluminium 6061 isher yesikrufu Kwimisebenzi yokuhlamba i-aluminium, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu emarikeni. Sineesayizi ezimbini kwisitokhwe sethu.M3x7x2.5mm...
Ukulungelelanisa ubungakanani obukulu beasherum yeAluminiyam Kwimisebenzi yokuhlamba i-aluminium, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu emarikeni. Sineesayizi ezimbini kwisitokhwe sethu.M3x7x2.5mm washer...
Ukuthengisa ishushu yealuminiyam kwi-Ebay Kwimisebenzi yokuhlamba i-aluminium, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu emarikeni. Sineesayizi ezimbini kwisitokhwe sethu.M3x7x2.5mm washer zingumdlalo kunye...
I-CNC Aluminium Anodised Colour Washers I-Washer ephezulu iyisebenzisa ngokuchanekileyo isitampu ukufezekisa i-washers ekumgangatho ophezulu. Zisetyenziswa kuzo zonke iintlobo zeenqwelomoya, iimodeli zemoto, imoto yeRC njl. Izinto zethu zokucoca...
Iindidi ezininzi zoMbane iiAluminiyam zeAalher zeewhers I-Washer ephezulu iyisebenzisa ngokuchanekileyo isitampu ukufezekisa i-washers ekumgangatho ophezulu. Zisetyenziswa kuzo zonke iintlobo zeenqwelomoya, iimodeli zemoto, imoto yeRC njl. Izinto...
I-aluminium weld washer yeasher yodidi IAluminiyam i-Countersunk Washer iluhlobo lweenqanawa ezomeleleyo, i-Countersunk Fender Washer yenziwa nge aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukubethelwa okungcono ngelixa kusasazwa umthwalo wesikrufu....
Iindidi ezininzi ezahlukeneyo ezingama-7075 zeAluminiyam Flat Washer Izinto ezingafunekiyo ezenziwe nge-aluminium okanye i-aluminium alloy zibonelela ngezinto ezikhaphukhaphu kwaye zihambelana ngakumbi ne-corrosion kune-washers yecarbon yentsimbi....
Umgangatho ophezulu we-7075 yeAluminiyam yeAlloydi yeFlat Izinto ezingafunekiyo ezenziwe nge-aluminium okanye i-aluminium alloy zibonelela ngezinto ezikhaphukhaphu kwaye zihambelana ngakumbi ne-corrosion kune-washers yecarbon yentsimbi. Zikwamelana...
KwiChina IAluminiyam Flat Washer Abaxhasi
Esona sitayela siqhelekileyo sabona bahers kukucoca iashedum yeasher. Ii-washer ezikhethekileyo zibonelela ngezibonelelo ezongezelelweyo. I-aluminium ejikeleze iashers zisetyenziselwa ukubonelela ngomhlaba ukuthambisa ukunxiba komhlaba. Bakwahambisa umthwalo wefirmener yokunciphisa ukungasebenzi komhlaba ukusuka ekuqineni ngokuqinisa okanye banokugubungela imingxunya enkulu yokucaca. Ubungakanani bohlobo oluthile kunye nemibala edlulileyo iyafumaneka ngokwemfuno yakho. Zombini i-washers ze-aluminium ezingama-6061-T6 kunye nee-washers ezingama-7075-T6 zilungile kuthi.
IAluminiyam Flat Washer IAluminiyam Hard Flat Washer IAluminiyam yeflethi yeAluminiyam I-Washer engasasebenziyo yeAluminium Flat Aluminum Flat Washer